कस्तो छ सन्नी लियोनीको नेपाली आइटम डान्स? (भिडियोसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो छ सन्नी लियोनीको नेपाली आइटम डान्स? (भिडियोसहित)
काठमाडौंः बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले नृत्य गरेको फिल्म ‘पासवर्ड’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच गीत सार्वजनिक गरिएको हो । ‘आजको साम’ बोलको आइटम गीतमा सन्नी बोल्ड अवतारमा देखिएकी छन् ।
बलिउड कोरियोग्राफर बिष्णु देभाको कोरियोग्राफी रहेको गीतमा सन्नी थुप्रै कोरसका साथ देखिएकी छन् । ५ करोड बढी लगानीमा तयार भएको यो फिल्मको गीतमा सन्नी र अभिनेता बिक्की जोशीको अभिनय देख्न सकिन्छ । विक्रम जोशीको शब्द, अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतमा दुर्गा खरेलको स्वर छ । गीत लण्डनमा छायाँकन गरिएको हो । २७ भाद्रबाट ‘पासवर्ड’ सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मलाई सम्राट बस्नेतले निर्देशन गरेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस सनी लियोनीले खोल्दै धेरैलाई चकित पार्ने जीवनको राज !
विक्रम जोशी, हिरल जोशी र अमित बस्नेतको निर्माण रहेको फिल्म एक्सन थ्रिलर जनरामा निर्माण भएको छ । फिल्ममा बिक्रम जोशी (विक्की), अनुपविक्रम शाहि, बुद्धि तामाङ, छुल्ठिम गुरुङ, विक्रान्त बस्नेत, रविन्द्र झा, प्रविण खतिवडा, लिशा सुनार, परिराना लगायतको अभिनय छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
याे पनि पढ्नुस चर्चित पाेर्नाेस्टार सन्नी लियोनी बनिन् जुम्ल्याहा बच्चाकी आमा
ट्याग्स: password, sunny leone